Masjid La Dhisay Qarnigii 13aad oo Loo Bedelay Baar Khamriga Lagu Cabo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Masjid La Dhisay Qarnigii 13aad oo Loo Bedelay Baar Khamriga Lagu Cabo
Masjid La Dhisay Qarnigii 13aad oo Loo Bedelay Baar Khamriga Lagu Cabo
Masjid qarniyaal dhisnaa oo ku yaal waqooyiga degmada Safed ee Dhulka Falastiin ee Yuhuud haysato ayaa loo bedelay baar lagu cabo khamriga, laguna qoob ka ciyaaro, sida ay soo warisay jariida Qudus All Carabiya
Masjidkan oo lagu magacaabo Al-axmar ayaa tan iyo 1948dii siyaabo kala duwan loo adeegsan sida Dugsi wax lagu barro caruurta yuhuuda, Xarun laga hago doorashada, Dukaanka dharka lagu iibiyo iyo ugu dambayntii oo laga dhigay Baar tumasho iyo khamrigu lagu cabo.
Khayr Tabari oo ah xogyahaha urur ay muslimiintu leeyihiin ee degaankaasi ayaa wargayska u sheegay in ay muddo dheer ka shaqaynayeen sidii dib loogu celin lahaa masjidkaas, Balse nasiib darro Hay’ad Yuhuudu leedahay oo xiriir la leh Dowladda Hoose ee Magaladaasi ay ku guulaystay inay u rogto baar lagu tunto, khamrigana lagu cabo.
” Goortii ugu dambaysay ee aan booqdo masjidkaasi aragagax ayaan kala kulmay, sida loo kharibay , quraankii darbiyada ku yaalay oo la tirtiray, laguna bedelay qoraalo luuqada yuhuuda ee cibriga” Sidaas waxaa yiri Khayr Tabari
Masjidan waxaa la dhisay sanadkii 1276 ee taariikhd Milaadiga. Culumada taariikhdu waxay sheegeen inuu yahay goob taariikhi oo ay muhiim tahay in la ilaaliyo. Sidoo kale waxaa jiro masjid kale oo la dhisay 1319, kaasi oo qowmiyada Giriigu ay u bedeleen xarun lagu soo bandhigo agabka taariikhda, iyadoo loo diiday in lagu oogo Saalada iyo cibaadada alle
Magaalada Safed ee uu ku yaal masjidku waxaa ka soo jeeda qoyska madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas, kuwasoo ka soo barakacay dagaalkii Yuhuuda iyo Carabta ee 1948dii. Tiro yar oo carab ah ayaa ku nool magaaladaasi xiligan.